एक गाउँ एक उत्पादनमा जोड दिनेछु | चितवन पोष्ट
गृह » एक गाउँ एक उत्पादनमा जोड दिनेछु
एक गाउँ एक उत्पादनमा जोड दिनेछु
पाल्पा जिल्लाको बाकामला गाविस वडा नं. ८ मा २०२४ साल चैत २५ गते जन्मिएका डासुराम पोख्रेल पाल्पाकै त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक तहसम्मका अध्ययन गरेका छन् । त्यसपछि उनले पाल्पाको राधाकृष्ण माविमा ५ वर्ष र लुम्बिनी आवासीय मावि कावासोतीमा १३ वर्ष शिक्षण पेसामा सम्लग्न रहे । बेस नेपालको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका पोख्रेल २०५७ सालदेखि व्यवसाय तिर लागेका हुन् । उनले अहिले विवेक इन्टरप्राइजेज एण्ड गिफ्ट हाउस सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पुष्प पाण्डेसँग मिलेर रियल स्टेट प्रालि पनि सञ्चालन गरेका छन् ।
एक कार्यकाल नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पोख्रेल आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
तपाइँको उम्मेदवारी के को लागि ?
सर्वप्रथम त मैले नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गरेको छु । यो मेरो लागि चुनावको नौलो अनुभव पनि हो । अध्यक्षमा उम्मेद्वारी गरिरहँदा मैले नवलपुर क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दाको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने, यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एकता र मैत्रीपूर्ण भावनाको विकास गराएर उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितको पक्षमा वकालत गर्ने, रक्षा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य विभिन्न किसिमका सामाजिक संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने गरी मेरो केही प्रतिबद्धताका साथ मनोनयन गराएको छु ।
सर्वप्रथम त, यो संस्था चलेको १२ वर्ष भएको छ । १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ भन्ने छ तर अहिलेसम्म नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले महासंघबाट एउटा सम्बन्धन लिन सकिरहेको छैन, मैले मेरो कार्यकालमा सम्बन्धन लिने पहिलो कार्य हुने छ, यसका लागि मेरो पहल हुने छ ।
दोस्रो उद्योग वाणिज्य संघलाई भवन निर्माणका लागि जग्गा लिन यहाँका दल, समाजका सबै तह र तप्कासँग सहमति जुटाएर भवनका लागि जग्गाको व्यवथापन गरेर, उक्त जग्गामा भव्य र सभ्य भवन बनाउने छु । जहाँ आफ्नै भवनमा कार्यालय रहने छ ।
महासंघको सदस्य लिन महासंघले पनि मापदण्ड तोकेको छ, जस्तो दुई हजार सदस्य हुनुपर्ने र २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई मात्र सदस्यता दिने गरेको छ । त्यसका लागि सदस्यता संख्या बढाउने र २० लाखभन्दा बढी कारोबार गराएर सदस्यता दिलाउने छु । मैले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ को अवधारणा राखेको छु । पहाडमा सुन्तला खेती, अदुवा, अम्रिसो खेती हुन्छ, त्यसले बजार पाउन सकेको छैन, त्यसका लागि बजारको व्यवस्थापन गर्नेछु । यहाँ एउटा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न पहल गर्ने छु । जसले गर्दा विदेशमा गएका युवाहरु स्वदेशमै बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि मेरो भूमिका रहने छ ।
–तपाइँहरु लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन बनेर चुनावमा जानु भएको छ । गठबन्धन नै बनाएर निर्वाचनमा जानु किन आवश्यक रह्यो ?
मैले यसलाई गठबन्धन नै त भनेको छैन, तथापि मन मिल्ने विचार मिल्ने साथीहरुसँग मिलेर प्यानल बनाएर मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । मैले १३ जनाको टिम लिएर मेरो नेतृत्वमा काम गर्न सक्छु भनेर प्यानल बनाएको छु । हामी सर्वसम्मतरुपमा जानु आवश्यक थियो, यसमा सबै दल, सबै तहतप्काका साथीहरु मिलेर नयाँ नेतृत्व बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तर केही साथीहरुले अर्को प्यानल बनाउनु भएछ, उम्मेदवारीको घोषणा गरिसक्नु भएको रहेछ । म पनि यस स्थानमा २० वर्षदेखि पेसा गरेर बसेको व्यापारी, यहाँका साथीहरुसँग व्यापारीसँग सबैको सुखदुःखमा साथ दिएको नाताले मेरो नेतृत्वमा मैले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
–सर्वसम्मतिको कुरा उठाउनुभयो, सर्वसम्मत हुने सम्भावना छ ?
अहिलेसम्म प्रयास भइरहेको छ, हुन पनि सक्छ । १८ गतेसम्म सहमतिको प्रयोग गरिरहने छौं । सहमतिमा जानु पर्छ । हुन त सबै एउटा नै एउटा पार्टीमा आस्था राखेका हुन्छन् तर एउटै प्यानलको भन्दा पनि सबै मिलेर सर्वसम्मतिमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
निर्वाचनमै गएको खण्डमा तपाइँको आफ्नो सम्भावनालाई कसरी लिनु भएको छ ?
मेरो प्रवल सम्भावना छ, म एकदमै विश्वस्त छु । हिजोदेखि म यो क्षेत्रमा आवद्ध भएँ, हरेक व्यापारीको सुःखदुःखमा सहभागी भएँ, मैले अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरुमा अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । यो समाजको आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यसकारणले म विश्वस्त छु, मैले जित्छु ।
यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या के छ ?
यहाँका व्यवसायीहरुले आफू उद्योग वाणिज्य संघको संरक्षणमा रहेको अनुभव गर्न पाउनुभएको छैन । उहाँहरुलाई कर कसरी तिर्ने, कर तिर्दा कसरी हिसाब किताब राख्ने भनेर तालिम पाउनु भएको छैन । यहाँ सबै राम्रा र सबै नराम्रा व्यापारीहरु हुनुहुन्छ भन्न सक्दिन तर यहाँ मिसावट गर्ने, कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई दण्ड जरिवाना र राम्रो गर्ने व्यापारीहरुलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
नवलपुर छुट्टै जिल्ला बन्यो तर नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लागत संघको मान्यता पाउन सकेको छैन, यसका लागि तपाइँको के भूमिका रहने छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता नै यही हो, हाम्रो विधानमा देवचुली र गैंडाकोट क्षेत्र बाहेकका भनेर सदस्यता पाउने क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अब नयाँ नेतृत्व आएपछि हुने साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेर नवलपुर जिल्ला भरीका व्यवसायी, उद्योगी व्यापारीहरुलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गर्ने छु । कावासोती सदरमुकाम भएको छ, यो सदरमुकाममा एउटा जिल्ला तहको उद्योग वाणिज्य संघ हुनुपर्ने छ त्यसैले यसको लागि मैले पहल गर्ने छु ।
तपाइँलाई नै नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यहरुले मतदान किन गर्ने?
सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायी वर्गहरुमा मेरो हार्दिक नमस्कार नमन छ । तपाइँहरुको प्रिय, प्यारो साथी म यस नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छु । यस क्षेत्रको व्यवासायीहरुको हकहित, अधिकार संरक्षण र यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि मलाई मत गरेर विजयी गराउनु हुने छ भन्ने आशा र अपेक्षा लिँदै मलाई मतदान गर्न आग्रह गर्दछु ।
नवलपुरलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन जोड दिनेछु
‘लोकसंगीतमा विकृति बढेको छ’ : लोकगायक नवीन पौडेल